Olee otú mbubata FLV ka iTunes
Olee otú iji tọghata FLV ka iTunes Library
iTune naanị akwado MP4, MOV na M4V formats. Ọ bụrụ na ị na-eti gị isi megide mgbidi agbalị chepụta otú na-esi gị flash (flv) videos jidesie gị iTunes, ịkwụsị! Ị na-aga-enye onwe gị isi na-awa! Nke ahụ bụ n'ihi FLV abụghị ihe iTunes na-akwado video usoro. Ị nwere ike kpọmkwem mbubata ndị a FLV faịlụ ka iTunes. Otú ọ dị, dị ka ọtụtụ ndị mmadụ, ị ga-nwere nza nke FLV faịlụ ebudatara site na ụfọdụ maara nke ọma weebụsaịtị ka YouTube. Na e nwere ndị a nnukwu ekwe omume na ị chọrọ etinye FLV ka iTunes ejikwa ma ọ bụ mmekọrịta na-iPhone, iPad wdg Na nke a, ị nwere ịrụ FLV ka iTunes akakabarede.
Iji tọghata FLV ka iTunes, a FLV ka iTunes video Ntụgharị ga-kacha mma oke maka gị. Na mgbe ahụ ị nwere ike mfe tinye gị FLV faịlụ ka iTunes.
Nkebi nke 1: Nweta Best & Professional FLV ka iTunes Ntụgharị
Part 2: Free FLV ka iTunes Ntụgharị
Nkebi nke 3: Online FLV ka iTunes Ntụgharị
Professional video Ntụgharị: Ị nwere ike iji ya iji tọghata fọrọ nke nta niile nke gị faịlụ ka iTunes, gụnyere FLV, MKV, DivX, XviD, M4V na ndị ọzọ.
Best video àgwà: Ị ga-dịghị mkpa ka nchegbu banyere mmepụta video mma. Ọ atọghata gaa nkịtị, 3D na HD vidiyo na ZERO àgwà ọnwụ.
Kasị ọsọ: The 30X kasị akakabarede ọsọ-eme ka ọ pụta niile nke asọmpi.
Ike video nchịkọta akụkọ: Ị nwere ike iji ya dezie videos na wuru na-video edezi ngwá ọrụ iji ewepụtụ, akuku, bugharia gị video.
Advanced DVD burner: Ọ na-enyere gị aka ime ka a ọkachamara DVD site na-ere ọkụ video ka DVD na ọtụtụ menu ndebiri.
Ugbu a, dị nnọọ na-eso m ịgbakwunye gị FLV faịlụ ka iTunes nzọụkwụ site nzọụkwụ. Tupu mgbe ahụ, ị ​​chọrọ ka ibudata ma wụnye a smart FLV ka iTunes Ntụgharị mbụ.
Olee otú iji tọghata FLV ka iTunes
1. Tinye FLV faịlụ ka FLV ka iTunes Ntụgharị
A na ngwa kpam kpam-enye atọ ụzọ dị iche iche tinye FLV faịlụ. Ugboro abụọ pịa oche icon na-agba ọsọ nke a ngwa, wee jiri onye ọ bụla n'ime ndị na-esonụ ụzọ Ibu Ibu faịlụ.
Ke isi menu, pịa "File" wee họrọ "Tinye Files" nhọrọ. N'oge a, ị nwere ike mbubata mpaghara gị FLV videos site na kọmputa a usoro.
See button na-agagharị na kọmputa na mbubata na ị chọrọ FLV faịlụ.
Nanị ịdọrọ na dobe FLV faịlụ a usoro.
2. Họrọ otu dakọtara usoro maka iTunes
A na ngwa awade nza nke na-ewu ewu video formats na tupu ntọala maka niile Apple ngwaọrụ. Ị nwere ike họrọ ihe iTunes na-akwado video usoro dị M4V ma ọ bụ onye ọ bụla n'ime kachasị tupu ọnọdụ dị ka mmepụta usoro.
Na ala nke interface, pịa "mmepụta Format" button ịhọrọ M4V si Profaịlụ ndọpụta ndepụta. Alternatively, ị nwere ike họrọ otu n'ime ị chọrọ Apple ngwaọrụ nlereanya site "Apple" Atiya nke profaịlụ ndọpụta ndepụta.
3. tọghata FLV ka iTunes
Na nke a nzọụkwụ, ị dị nnọọ mkpa pịa "tọghata" button na ala-nri akuku nke a ngwa si interface. Lee, nke a na ngwa na-converting FLV na iTunes dakọtara format ugbu a. Ị pụrụ ịhụ ẹkụre pasent na ike nke oge.
Mgbe convering faịlụ, dị nnọọ pịa "Open nchekwa" nhọrọ ịchọta mmepụta faịlụ, na mgbe ahụ kpọmkwem ịdọrọ ha gị iTunes n'ọbá akwụkwọ mgbe na-agba ọsọ iTunes ngwa.
Video Tutorial: Olee otú Jiri FLV ka iTunes Ntụgharị
# 1. Free FLV ka iTunes Ntụgharị: Wondershare Video Converter Free
Ọ bụ ihe na nnọọ free FLV ka iTunes video Ntụgharị na-enweghị mmezi ụgwọ. Ị nwere ike iji nke a free iTunes video Ntụgharị iji tọghata ọ bụla video ka iTunes dakọtara formats, dezie videos na kpochapụwo video edezi ọrụ, na ibudata vidiyo si na ọtụtụ video nkekọrịta saịtị.
Pro: zuru ezu free FLV ka iTunes video Ntụgharị, vasatail video akakabarede ngwá ọrụ
1.There dịghị presets nyere n'ihi na ị na-ahọrọ dị ka video mmepụta formats.
2.The video mmepụta àgwà nwere ike belata, mgbe Video Converter Ultimate atọghata video na-enweghị àgwà ọnwụ.
3. Na okwu nke na-ere ọkụ video ka DVD, ị na-agaghị ekwe na-eji nke a funtion na free version.
Olee otú iji tọghata FLV ka VOB
Dum ndu nke AVCHD codec
Olee otú Download Music si Spotify ka iTunes na Windows na Mac
Video Ntụgharị maka Windows 8: tọghata Videos ọ bụla Format
WMV Ntụgharị - tọghata Videos n'etiti WMV na ndị ọzọ Videos
Olee otú iji tọghata VOB ka MPEG na Mac / Win (Windows 8)
> Resource> tọghata> Olee mbubata FLV ka iTunes